Alakamisy 24 martsa 2016 Asabotsy 13 Febroary 2021 Douglas Karr
Na dia manohy manao fifanarahana lehibe amin'ny fitomboan'ny varotra an-tserasera aza izahay dia zava-dehibe ny mahatadidy fa ny 90% ny fividianana mpanjifa dia mbola vita amin'ny fivarotana antsinjarany ihany. Tsy midika izany fa tsy misy fitaomana lehibe ny Internet - izany dia. Mbola tadiavin'ny mpanjifa ny fahafaham-po amin'ny fijerena, fikasihan-tanana ary ny fitiliana vokatra alohan'ny handoavana izany. Tsy vaovao ny ROBO, fa lasa mahazatra amin'ny dia ataon'ny mpanjifa sy a
Ny fiantraikan'ny naotin'ny vokatra Shopper amin'ny mpivarotra AdWords
Alakamisy 12 martsa 2015 Asabotsy 4 Febroary 2017 Scott Donald
Navoakan'i Google ny fampiasa AdWords tamin'ny faran'ny volana Jolay mba hanampiana ireo mpiantsena handray fanapahan-kevitra mividy vaovao. Ny lisitry ny lisitry ny vokatra (PLA) manerana ny Google.com sy ny Google Shopping dia hanana naoty na fivarotana Google. Eritrereto i Amazon ary izany indrindra no ho hitanao rehefa mikaroka vokatra sy serivisy ao amin'ny Google ianao. Ny valin'ny vokatra dia hampiasa ny rafitra naoty kintana 5 miaraka amin'ny isa fanombanana. Andao hatao hoe eny an-tsena ho an'ny mpanamboatra kafe vaovao ianao. Rahoviana
Ny hoavin'ny sosialy dia ny hoavin'ny marketing
Alatsinainy Oktobra 22, 2012 Alarobia, Septambra 25, 2013 Marty Thompson
Vao haingana aho no nanana fotoana nanatrehana ny ExactTarget Connections 2012, ary tao anatin'ny adihevitra marobe, nankafiziko manokana ilay mitondra ny lohateny hoe Social 2020: Inona no ho tonga amintsika? Notsimbinin'i Jeff Rohrs, VP Marketing Research & Education ao amin'ny ExactTarget, izay nahitana an'i Margaret Francis, VP of Social at ExactTarget, David Berkowitz, VP an'ny Emerging Media ao amin'ny 360i, Stephen Tarleton, talen'ny Global Channel & SMB Marketing Bazaarvoice, ary Sam Decker, CEO ary mpanorina ny lamesa